मापदण्ड विपरीतका घर कहिलेसम्म ठडिने ?
भूकम्पले विनाश गरेपछि मापदण्डविपरीत अग्ला घर बनाएर आफूलाई ठालु ठान्ने एकथरी नागरिकको घैँटोमा घाम लागेको छ भने नेपाल सरकारको पनि सम्भवतः चेत फिरेको देखिएको छ। नीति बन्ला वा नबन्ला,
युवाशक्तिको दुरूपयोग भयो
नेपालमा रोजगार दिन नसक्ने सरकार र सरकारमा संलग्न दलहरूले युवाशक्तिको दुरूपयोय गर्दै आएका छन्। आफ्नो दलमा झन्डा बोकाउने र उनीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न रोजगारीका सम्भावना बन्द गरिएको छ।
शिक्षा ऐनको संशोधनमा घातक कदम
संसद्ले मंगलबार गरेको शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन देशको सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा गरिएको निर्मम प्रहार भएको छ। यसले लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि संसद्ले गरेको गम्भीर खेलबाड भएको छ। दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत
संविधान सफल बनाउन अझै कस्सिनु जरुरी
संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएको असोज ३ गते २ वर्ष पूरा भएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुक सफल र सहज गन्तव्यतर्फ उन्मुख भएको छ। यसलाई उचित तरिकाले अवतरणको खाँचो अझै छ।
माओवादी शक्ति एकजुट होऔं
टुटफुट र विभाजन होइन, एकता र क्रान्तिको बाटो रोज्न अब माओवादीले कदम चाल्न जरुरी भएको छ। विभिन्न प्रशिक्षणमा म पनि सहभागी भएको मान्छे हुँ। हिजो तपाईंहरुको प्रशिक्षणमा बस्दा पाएको
पोखरेलहरुको बडादशैँ पूजा
बडादशैँको माहोल शुरु भैसकेको छ। विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं आई बसोबास गरेका व्यक्तिहरु दशैँका लागि आ–आफ्ना घर–गाउँतर्फ जान थालेकाले लामो रुटका सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा भीड बढिसकेको छ। हुन त पछिल्लो
ट्राफिक प्रमुखलाई प्रश्न
म आफ्नो निवास भैंसेपाटीबाट गाडीमा सधैँ बिहान करिब ९ बजेदेखि १० बजेको आसपासमा भीमसेनस्थानमा रहेको कार्यालयमा आउने गर्छु। हिजो ४ गते बुधबार पनि यसै गरी गाडीमा आएँ। सधैँभैmँ बिहान ९ः३०
व्यवसायीको मनोमानी रोकियोस्
हिन्दूहरुको महान् पर्व दशैँको चहलपहल शुरू भइसकेको छ। दशैँको किनमेलका लागि सर्वसाधारणको चाप बढ्न थालेसँगै बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सृजना हुनसक्ने देखिन्छ। अनि सम्भावित आपराधिक घटनाको चुनौती पनि
संविधान संशोधन र संघीयताको सन्दर्भमा फुरेको संवाद
ल नेपा र नेवाःको सम्बन्ध के छ ? नेपाल र नेपालीको जस्तो सम्बन्ध छ, त्यस्तै जस्तो लाग्छ। ल ठीक, त्यसो भए नेपालका जनतालाई नेपाली भनेजस्तै नेपा देशका जनतालाई के
संघीयता कसरी धानिएला ?
नेपालीको थाप्लोमा लाखौं ऋण बोकाएर गरिब बनाउने सरकारले संघीयता कसरी धान्ला र ? स्थानीय जनप्रतिनिधि र ५ सय ७५ सभासद, ८० राष्ट्रिय स्तरका दल, हजारौं नेता, ४० भन्दा बढी
राज्यको ढुकुटी सक्ने खेल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भ्रमण तालिकासँगै कूल भ्रमण खर्च पनि सार्वजनिक भएको छ। २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ३ गते न्युयोर्क
साहस, हिम्मत र आँट कसमा छ ?
हामी नागरिकले तिरेको राजस्वलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र शाह र श्री ३ जंगबहादुर राणा पनि वास्तवमा सेना
विगतका दशैंहरुमा देशभर झन्डै १ हजार सार्वजनिक बस थपिन्थे। तर, यो वर्ष त्यसको २५ प्रतिशत पनि बस नथपिएको समाचार बाहिर आएको छ। काठमाडौं आउजाउ गर्ने रुटमा मुस्किलले ५०⁄६० वटा
अनियमितता गर्नेलाई खबरदारी गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बेला आफैं गलत काम गरेको छ। आफ्नो काम सही ढंगले नगर्नु पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार